देउवाले धमाधम गठन गरेका विभाग खारेज गर्न गगन थापालगायत १२ केन्द्रीय सदस्यको माग :: Setopati
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको मुखमा धमाधम विभागहरू गठन गरेर महाधिवेशन निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउने काम गरेको कांग्रेसका १२ जना केन्द्रीय सदस्यले आरोप लगाएका छन्।
१३ औं महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने विभाग गठन सभापति देउवाले चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि थपिएको कार्यकालमा धमाधम मनोनित गरिरहेका छन्। यी विभाग २०७२ सालमै गठन हुनुपर्ने हो। तर सभापति देउवाले ३० भन्दा बढी विभाग गठन गरिसकेका छन्।
‘महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया शुरु भएपछि पार्टीका साथीहरुमा आपसी तिक्तता बढाएर पक्ष र विपक्ष खडा गर्नुको उद्देश्य के हो? यस कार्यबाट महाधिवेशनको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ र पार्टीका सबै तहको मिति तोकिसके पश्चात् बिभिन्न नियुक्तिहरु गर्नु महाधिवेशन आचारसंहिताको ठाडो उलंघन गर्नु हो,’ केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, रत्ना शेरचन, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव, किरण यादवले मंगलबार निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अहिले गठन गरेका विभागहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न समय नपाउने पनि उनीहरूको भनाइ छ। ‘हामीले बनाएका विभागहरुले आफ्ना विभागीय काम कहिले गर्ने? विभाग गठनका कार्य तत्काल रोकिनु पर्छ र गठन गरिएका औचित्यहिन विभागहरु खारेज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै १२ जना केन्द्रीय सदस्यले सहमतिमै धारणा सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए।
चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, रत्ना शेरचन, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाँई, रामकृष्ण यादव, किरण यादव।